Umzimba womntwana kufuneka uhlakulele ngokugcwele kwaye ukutya kufuneka kuluhluke, luncedo kwaye luhle. Ukuze uzalise isidingo se-calcium, iivithamini kunye neeprotheni, kufuneka udibanise iimveliso zobisi zansuku zonke kunye ne-cottage cheese ekudleni kwakho. I-Cottage cheese igqithisa imetabolism, iyomeleza inkqubo ye-nervous, ingumthombo wezinto zokwakha izihlunu namathambo. Le nto ibalulekileyo yiprothini yomkhiqizo, onomgangatho ophezulu wokutya okunomsoco kwaye uphelelwe ngumzimba womntwana.
Ndiyakwazi nini ukungena kwi-cottage cheese kwimenyu yabantwana?
Umntwana kufuneka anikwe i-cottage ushizi ukusuka kwiinyanga ezi-6 okanye ezi-7, ngokunyuka ukwandisa isabelo kwaye ngomnyaka omnye kufuneka ufike kuma-50 grams. Ukuba umntwana usuvala i-fontanel ngokukhawuleza, ke le mveliso kufuneka ingeniswe emva koko emva kweenyanga ezili-9. Yazi ukuba izondlo ezingaphantsi kwe-3 azicebisi abantwana ukuba banike i-cottage cheese evamile, abantu abadala abazithengayo.
Yiyiphi enye ingcono kunekotishi?
Kungcono ukuthenga i-cottage shizi kumntwana okhethekileyo wokukhahlela okanye ukuthenga i-cottage shiese kwiikhizi lebisi. Ukhetho kufuneka lugqitywe kwimveliso, enesimo sekhefu esingapheli kweveki. Ukuba loo mveliso ifanele inyanga enye okanye iinyanga ezintandathu, ke ayinayo yonke into efanelekileyo.
Nangona i-cottage cheese inenzuzo enkulu, abaninzi abantwana bayenqaba ukuyidla. Kodwa nakweyiphi na imeko ihlala ilula indlela yokuphuma. Abantwana abancinci banokungeniswa kwipareji eboyiweyo, i-apula okanye ibhanana elifihliweyo. Ehlobo, ukhetho olulungileyo luya kuba: i-currant, i-strawberry, i-apricots, iipereaches. Kwabantwana abadala, ungenza i-cheese curds, i-pancake kunye nokuzalisa i-curd, i-vareniki, okanye i-cheese.
Into ebaluleke kakhulu kumntu kunye nento ebalulekileyo yokulandelela i-calcium. Uxhasa ubomi obuqhelekileyo bomntu nanini na ubudala. Indima ye-calcium ayinakugqithiswa xa i-squelem sabantu ikhula ngamandla kwaye yakha isiseko somzimba. Amathambo akwandisa ubude ukuya kwiminyaka eyi-15, ngoko ukukhula kwabo kuphungula kwaye kufike kwiminyaka engama-25 ubukhulu beethambo buya kwanda. Esi sibonakaliso siqinisekisa impilo yamathambo omntu ubomi bakhe bonke. Ukuba umzimba uqokelele inani elaneleyo le-calcium kwaye yenzeke ngokusesikweni amathambo, ngokobudala bokuba le nzekayo ye-osteoporosis iya kuba yinto encinci. Ukufumana i-calcium, phakathi kokutya, kufuneka uhlukanise i-cottage shiese, ubisi kunye neziphumo zayo. I-curd yezingane iyenziwa kubisi olususwe ngu-ultrafiltration nokuvuthwa. Le ndlela yokuvelisa isetyenziselwa kumashishini akhethekileyo kwaye le kisikidi ishicilelwe kakuhle ngumntwana. I-Cottage cheese inotyebi kakhulu kwiprotheni. Oku kuqwalaselwa xa kugqiba ukutya kwansuku zonke.
I-Cottage cheese inikeza umzimba womntwana ngeprotheni kunye ne-calcium. Kuyo enye enye ibaluleke kakhulu i-microelement - i-phosphorus, ayinakuhlukaniswa ne-calcium. Kuphela kunye kunye ne-phosphorus calcium isebenza ngempumelelo kwaye i-cottage cheese ithathwa njengemveliso ehambelana nokubonelela ngezi zinto kumzimba okhulayo.
Ukutya kwabantwana, nangona izitya kunye ne-curd zonyango, ziyancitshitshisi i-phosphorus ne-calcium. I-Cottage cheese casseroles kunye nomoya ophefumulayo ubonakala ngonyaka wesibini wobomi kwimenyu yabantwana. Abantwana bathanda le izitya, zilungiselelwe ngeenqathe, iinqabileyo, i-jams kunye neziqhamo ezintsha. I-content content ye-cottage cheese yabantwana abayi-9%. Ixutywe kakuhle, iqukethe amino acid ezifunekayo ezithatha inxaxheba kwi-metabolism.
Ukutya kwabantwana, i-cottage cheese yinto enemveliso, eyiluncedo kwiindidi ezahlukeneyo kwaye iluncedo kwimo yayo yemvelo.
Imihla yokuqaliswa kokutya okuncedisayo
Indlela yokondla umntwana oneminyaka engaphantsi kwe-1 ubudala
Yongeza ukukhanya kunye nobukhali kulwalamano
Uyazi njani ukuba umfazi ufuna ntoni?
Ikhemishi ye-cream-chocolate kunye nobisi olunamanzi
Uvuyo olukhulu ngomhla wokuzalwa komfazi kwivesi kunye neprose